2.1. အနုပညာခရီး ၂၀၀၆-၂၀၀၉၊ အစ
ဂျီသည် ဂီတဇာတ်ရုံ၌ စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ရုပ်ရှင် နေ့ရက်များစွာ. ၌ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး နှလုံးသားဝှက်သူ ၂၀၀၈ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ၌ မထင်မရှားဇာတ်ရုပ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ရုပ်ရှင် အိပ်ပျော်နေသောမိန်းမလှ ၌သာ တရားဝင် ပွဲဦးထွက်သည်။
၂၀၀၉ ၌၊ ပြည့်စုံလွန်းတဲ့သားတွေ ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပါပြီး၊ သိမ်မွေ့ပြီး မိန်းမဆန်သော ညီအထွေးဆုံးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကာ အသက် ၂၀ အရွယ်၌ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၏ သမီးကို မွေးမြူခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ထို့နောက် အက်ရှင်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ ဟီးရိုး ၌ ဇာတ်ပို့ပါဝင်သည်။
2.2. အနုပညာခရီး ၂၀၁၀-၂၀၁၂၊ လူကြိုက်များလာခြင်း
၂၀၁၀ ၌ ၁၅၉ ပိုင်းပါ ထပ်ပြုံး ၌ စတင်ပါဝင်သည်။ ကိုရီးယားအမေရိကန် ရေခဲစကိတ်ပတ်လမ်းတိုပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်နှင့် ရေခဲစကိတ်ကွင်း၌ တနေ့လျှင် လေးငါးနာရီ လေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်။ ထပ်ပြုံး သည် ၁၅ ပတ်ဆက်တိုက် ဘုတ်တွင် ထိပ်စွဲပြီး ကေဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး နေ့စဉ်ရုပ်သံမင်းသားဆုကို သူသည် ချီးမြင့်ခံရသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၁ အက်ရှင်-သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲ စစ်သည်တော်ဘက်ဒုန်းဆူ ၌ အမည်ခံဇာတ်ရုပ်၌ ပါဝင်သည်။ မူလက လီဂျေဟော်၏ ကာတွန်းဇာတ်လမ်း ဂုဏ်သရေရှိဘက်ဒုန်းဆူ ကို မှီငြမ်းထားသော ၎င်းသည် ဂျိုဆွန်းခေတ် ဓားသမား ဘက်ဒုန်းဆူဆိုသူသည် ငယ်စဉ်မှ ကြီးပြင်းလာသည့်တလျှောက်တွင် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလာသည်မှ ငယ်ကျွမ်းဆွေ တဖြစ်လဲ ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရပုံ အကြောင်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲသည် ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ်၌ ၁၃ ပတ်တာ နံပါတ်တစ် ဖြစ်ပြီး၊ ဂျီသည် အက်စ်ဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲ၌ မျက်နှာသစ်ဆုကို ရရှိသည်။ ထိုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ အခပေးရုပ်သံ လူပျိုကြီးရဲ့ဟင်းရွက်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ အဓိကဇာတ်ရုပ်အဖြစ် ပါပြီး၊ ဖြစ်ရပ်မှန်အောင်မြင်သူတယောက်အကြောင်း အခြေခံထားကာ သေးနုတ်သော စတုရန်းပေ ၃၅၀ ရှိ ဟင်းရွက်ဆိုင်ကို ၁၉၉၈ ၌ စတင်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတဝန်း ဆိုင်ကြီး ၃၃ ဆိုင်အထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပုံအကြောင်းဖြစ်သည်။
2.3. အနုပညာခရီး ၂၀၁၃-၂၀၁၇၊ ပြည်ပထိ ထိုးဖောက်ခြင်း
ဆုန်းဂျီနာ ရေးသားသော ထိတ်လန့်အက်ရှင် ဟီးလား၌ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီအထိ အဓိက သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ လျှို့ဝှက်သော ကြေးစားသမားဇာတ်ရုပ်အတွက် သိုင်းသင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ လွှင့်ပြီးသော် ဂျီသည် တရုတ်နှင့် အာရှအတော်များများ၌ လူကြိုက်များသွားလေသည်။ ၂၀၁၅ တွင် ဝေးပေါ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး ဖန်များကို လက်ခံရာ နှစ်လမပြည့်မီအတွင်း၌ ဖန်ပေါင်း တသန်းကျော်လေသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၅ ကိုရီးယားမီဒီယာများက ပြုလုပ်သော ချစ်သူများနေ့မှာ ဘယ်ကိုရီးယားအမျိုးသားသရုပ်ဆောင်နဲ့ အချိန်းတွေ့ချင်ဆုံးလဲ မဲပေးလှုပ်ရှားမှု၌ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် နံပါတ်တစ် ရသည်။ ထို့နောက်တွင် လေပွေမိန်းကလေး ၂ နှင့် မစ္စတာရိုက် တရုတ်စကားပြောဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၇ ၌ အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သော လံကြုပ်မြို့ကြီး ၌ အလုပ်မရှိသော ဂိမ်းစွဲနေသူတဦး ဘဝမှ နာမည်ကြီးလူသတ်သမား ဖြစ်လာပုံ သရုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ထပ်ရိုက်ကူးသည့် အက်စ်ဘီအက်စ်၏ ရို-ဟာ-ဖို ဇာတ်လမ်းတွဲ ဒီမိန်းမကို စောင့်ကြည့်ထား သည် မေလ၌ အစမ်းပြရန် စီစဉ်ထားသည်။ Ji is also set to star asareckless rookie constable alongside Sol Kyung-gus apathetic veteran officer in the period-comedy film Two Constables, the fourth installment in the Two Cops franchise directed by Kang Woo-suk.